दमित ज्वालामुखीहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
पुस १४, २०७६ नारायणी देवकोटा
गत हप्ता त्रिवि समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक नीति अर्यालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, ‘चालीस पुग्न लागेका महिलाहरू दमित ज्वालामुखी हुन्, कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छन् ।’ उहाँको पोस्ट पढ्दै गर्दा म समाजशास्त्रको परिकल्पनाको विषयमा विद्यार्थीका नोटहरू हेर्दै थिएँ ।
समाजशास्त्रका बीए र एमएका विद्यार्थीहरूलाई पहिलो कक्षामा आफूमा समाजशास्त्रीय नजर कसरी विकसित गर्ने भनेर पढाउनुपर्ने हुन्छ । र, समाजशास्त्रीय परिकल्पनाको सार हो, ‘हरेक कुरा सामाजिक सम्बन्धहरूका आधारमा निर्मित हुन्छ ।’ विद्यार्थीहरू लेख्छन्- कसैसँग कसैको प्रेम हुनु सामाजिक विषय हो; कोही मान्छे टेडो, घुसघुसे, कुरा काट्ने हुनु सामाजिक कुरा हो; सगरमाथाको हिउँ सामाजिक हो; भगवान् सामाजिक विषय हो; बलात्कार वा मिटु वा डिभोर्स सामाजिक पनि हो । महिलाहरू दमित ज्वालामुखी भइरहेको अहिलेको अवस्था पनि सामाजिक सम्बन्धहरूका आधारमा निर्मित सत्य हो ।
महिलालाई अधिकार धेरै भयो ?
विश्वविद्यालयदेखि चियापसलसम्म, विवाह वा व्रतबन्धदेखि कथित वैचारिक भेलाका चियागफसम्म महिलालाई अधिकार बढी भएको भनेर छटपटी सुनिन्छ । तर महिलाका आँखामा, नेपाली महिला आज पनि चरम विभेदमा बाँचिरहेका छन् । सरकारले नै नागरिकतामा गरेको विभेदले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएकै छ । पैतृक सम्पत्तिमा कानुनी अधिकारको व्यवस्था भए पनि अपवादबाहेक छोरा र छोरीलाई बराबरको अधिकार न बाआमाले दिन सकेका छन्, न त छोरीहरूले लडेर लिन सकेका छन् । अहिले पनि महिलाले आफ्नै घरभित्र गरिरहेको कामको मूल्यांकन गर्ने कुनै विधि विकास हुन सकेको छैन र घरभित्रको काममा महिलाको स्थान पुरुषले लिन सकेका छैनन् । अहिले पनि महिला शरीरलाई वस्तु बनाउने क्रम घटेको छैन ।
महिलाले के अधिकार पाएका छन् र धेरै भयो भनेर सोध्ने हो भने, ‘अब महिलालाई छुन हुँदैन, छोयो भने फसिन्छ’ भन्दै भर्खरै यौनशोषण र दुर्व्यवहारका कारण आफ्नो शक्तिबाट हटेका केही पुरुषको उदाहरण दिने गरिन्छ । कसै–कसैले ‘फलानाकी श्रीमतीले यसरी कुट्छे’, ‘फलानी श्रीमान्‌को सबै जायजेथा उठाएर हिँडी’ जस्ता उदाहरण दिने गरिन्छ ।
पुरुष बिचरो ?
फलानालाई श्रीमतीले कुटिरहन्छिन् भनी सुनाउने व्यक्तिलाई ‘त्यसो भए प्रहरीमा जाने नि’ भनेर सुझाव दिँदा उनले भने, ‘श्रीमतीले कुटी भनेर प्रहरीलाई भन्न कसरी जाने ? लाज हुन्छ ।’ कुरा गर्दै गएपछि थाहा भयो— उनी आफ्ना साथीले बदलामा श्रीमतीमाथि हात उठाउन नसकेका कारण दुःखी रहेछन् । उनका अनुसार, महिलाले धेरै पाएको अधिकारचाहिँ घरेलु हिंसाको कानुन रहेछ । श्रीमतीले आफूलाई कुट्दा हात फर्काए घरेलु हिंसा गरेको उजुरी हुने, आफैले उजुरी गर्न पितृसत्तात्मक अहम्ले नदिने ! ढाडभरि सुम्ला बोकेर हिँडिरहेको मान्छेले पितृसत्ताले थोपरिदिएको पुरुष अहम्का कारण ‘मलाई दुखेको छ’ भन्न पनि सक्दैन !
पितृसत्तामा महिला वा यौनिक अल्पसंख्यक जति बिचरा हुन्, त्यही मात्रामा नभए पनि पुरुषहरू पनि बिचरा हुन् भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । समाजशास्त्रीहरू टिम, रोबेर्ट र केन्ट ‘सोसियलजी फर दी ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी’ किताबमा लेख्छन्, ‘पितृसत्ताले बनाएको लैंगिक भूमिकाका कारण पुरुषमा आक्रामक, दमनकारी, बलियो, भावुकता नभएको र आर्थिक रूपमा सफल हुनुपर्ने बाध्यता थोपरिएका छन् । यसैका कारण पुरुषको आत्महत्या दर महिलाको भन्दा तीन गुणा बढी छ, ती महिलाभन्दा छ गुणा बढी अल्कोहलिक हुन्छन् र तिनलाई महिलालाई भन्दा धेरै बढी हार्ट अट्याक हुने गर्छ ।’
महिला र यौन अल्पसंख्यकको अधिकारको कुरा पुरुषको विरोध होइन, पितृसत्ताको विरोध हो भनेर धेरै पटक धेरै महिलावादीले भनिसकेका छन् । र, थप भनिरहेका छन्, ‘पितृसत्तात्मक सोचले महिला र यौनिक अल्पसंख्यकलाई मात्रै होइन, पुरुषहरूमाथि पनि हिंसा गरिरहेको छ । पुरुषलाई पनि मान्छे बन्न दिएको छैन ।’ तर, महिलालाई आममान्छे मान्न नसक्ने गरी पितृसत्ताले गाँजेका मानिसहरू (पुरुष, महिला दुवै) ले महिला पनि मान्छे हुन्, महिलाका विषय पनि अन्यझैं आम सरोकारका विषय हुन् भनेर स्वीकार गर्नै सकेका छैनन् । पुरुषले युगौंयुगसम्मको नाता भनेर विवाह गरेकी महिलालाई आफ्नी पार्टनर मान्न सक्दैन । काम गर्ने शारीरिक क्षमता नभए पनि ‘म अब घरमा कमाएर ल्याउन सक्दिनँ, बरु धेरै शारीरिक श्रम नचाहिने काम गर्छु’ भन्न पनि सक्दैन । अनि जब महिलाले आफ्ना बारेमा, आफ्ना अधिकारका बारेमा बोल्न थाल्छन्, धेरैलाई चिडचिडाहट हुन थाल्छ ।
महिलाको विषय नबुझी सुखै छैन
गएको एक वर्षमा काठमाडौंबाट निस्कने दैनिक पत्रिकाहरूका शनिबारे परिशिष्टांकहरूमा महिलाका मुद्दाहरूले पहिलाभन्दा बढी ठाउँ पाउन थालेका छन् । धेरैलाई मन पर्दै आएका त्यस्ता सामग्री केही नियमित पाठकलाई मन परेनछन् । दशकौंदेखि मूलधारको पत्रकारिता गरिरहेका एक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखे— ‘नेपाली लेखकसँग आफैले भोगेका कुराबाहेक लेख्ने सामग्री छैनन् ?’ उनको पोस्टमा अर्का लेखकले टिप्पणी गरे, ‘संस्मरण सबभन्दा सजिलो र कसैले सितिमिती खोट देखाउन नसक्ने विधा भएकाले यस्तो भएको हो ।’
यसरी समाजमा महिला मुखर भएको लेखन र साहित्यको धरोहर आफूले थामेको सोच्नेहरूलाई पच्दैन । ‘महिलाका विषयमा लेख्ने’ भनेपछि नाक खुम्च्याउनेको कमी छैन । तर महिला मुद्दा महिलाका मात्रै होइनन् । उदाहरणका लागि, भर्खरै त्रिविमा एक प्राध्यापकले महिला सहकर्मीलाई हात हाले र नाम उल्लेख नगरिकन गरिएको सामाजिक सञ्जालको पोस्टलाई लिएर उनले चारैतिर फोन गर्दै फलानीले ‘आरोप लगाएको मैलाई हो’ भन्न भ्याए । उनले ‘मलाई त यस्तो विषयमा थाहा थिएन’ भन्न पनि भ्याए । त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पसमा समाज विज्ञान पढाइरहेको मानिसले महिला अधिकारबारे, समाजको वर्तमान ‘फेनोमेना’ बारे जानकारी नै छैन भन्नु कुन हदसम्मको गैरप्राज्ञिक कुरा हो ?
महिलाका विषय फगत महिलाका मात्रै होइनन् भनेर बुझ्न जरुरी छ । हिन्दु धर्मशास्त्रमा पाप र पुण्यबारे एउटा भनाइ छ, ‘आगोले आगो हो भन्ने जान्नेलाई पनि पोल्छ, नजान्नेलाई पनि पोल्छ ।’ मैले महिलाका विषयमा जानेको छैन, फलानीलाई त मैले काखमा हुर्काएको भन्दैमा उनीहरूमाथि जहिल्यै हक जमाउन मिल्दैन । हक जमाउन खोज्दा उनीहरूले कानुनी लडाइँ लड्न सक्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
नागरिकताको सवालबाहेक कानुन अहिले महिलाका पक्षमा छ । तर, कानुनका काला अक्षर व्यवहारमा रूपान्तरण हुन अझै सकेका छैनन् । महिलाले आफ्नै सामाजिकीकरणका कारण पनि कानुनी लडाइँ लड्न सकिरहेका छैनन् । अर्को कुरा, महिलालाई अब घरको चौघेरो र कार्यक्षेत्र दुवैतिर काम गर्नुपर्ने भएको छ । आफ्नो अधिकार अरूले लिएको पीडा महिलाले आगोजसरी बोकेर हिँडिरहेका छन् । बाहिर हेर्दा मुसुक्क हाँसिरहेका महिलातिर जब पितृसत्तावादी सोचको तीर सोझ्याइन्छ, त्यहाँबाट मुस्कान होइन, ज्वालामुखी निस्कनु स्वाभाविकै हो । प्रकाशित : पुस १४, २०७६ ०९:१६
मंसिर २५, २०७६ नारायणी देवकोटा
लगातार दुई घण्टा पढाएपछि कार्यालयमा उभिएरै तातोपानी पिउँदै थिएँ, चिनीको बट्टा देखेपछि ‘चियापत्ती पनि छ कि ?’ भनेर सोधेँ । मेरो बोली भुइँमा नखस्दै एक सरले भन्नुभयो, ‘हामीलाई चिया खुवाउनुहुन्छ ?’ मैले ‘यहाँ तपाईंलाई चिया पकाएर खुवाउन मलाई नियुक्त गरिएको होइन होला’ भनेर जवाफ दिएँ ।
त्रिविमा समाजशास्त्र विभागले एमएको परीक्षापत्र कसरी जाँच्ने भन्नेबारे एमए पढाउने समाजशास्त्रका लेक्चररहरूबीच छलफल चलाएको थियो । छलफलबाट निस्कँदै गर्दा एक सरले सिनियर मेडमलाई सोधे, ‘तपाईंको ब्यागमा केही खाने कुरा छैन ?’ मेडमले दिक्क मान्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, ‘तपाईंले राख्न दिनुभएको थियो र ?’ अनि केही बेरपछि मलाई भन्नुभयो, ‘केटाहरू किन त्यसरी तिम्रो ब्यागमा के खाने कुरा छ भनेर सोध्छन् ?’
यस्ता घटना उल्लेख गर्दै गए सूची लामै बन्छ । वन मन्त्रालयका महिला कर्मचारीलाई ‘बहिनी’ र पुरुषलाई ‘सर’ भन्ने गरिएको समाचार आएको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । सर र बहिनीको सम्बोधन वन मन्त्रालयमा मात्रै सीमित छैन । आमरूपमा सामान्य लाग्ने यस्ता घटनाले कार्यक्षेत्रमा महिलाहरूलाई दिक्क बनाइरहेका हुन्छन् । अनि आफूभन्दा पुरानासँग रातो मुख लगाएर बाझ्ने वा अँध्यारो मुख लगाएर हिँड्ने अवस्था आउँछ । यस्तो मानसिक अवस्थामा आफ्नो पेसा–व्यवसायबारे छलफल वा कुरा हुँदैन । यस्तै भयो सागमा पनि । सागमा विजय र त्यसमा महिला खेलाडीको अभूतपूर्व सफलताका कथा कुनै पनि नेपाली मन उज्यालो बनाउनलाई पर्याप्त छन् । तर अब्बल महिला खेलाडीहरूलाई केही सञ्चार माध्यमले ‘चेली’ सम्बोधन गरेपछि ‘त्यस्तो सम्बोधन नगरौं न’ भन्ने महिलाहरूको सामान्य अनुरोधमाथि विषवमन गरियो, गरिँदै छ ।
यसरी विषवमन गर्ने बेला जब सामाजिक नैतिकताका न्यायाधीशको भूमिकाको ठेक्का आफूले लिएको सम्झने पितृसत्ताले तर्कले जित्न सक्दैन, तब महिलामाथि सदाबहार आरोप लगाउने गरिएको छ— ‘डलरमा बिकेकाहरू’, ‘डलरको खेती गर्नेहरू’, ‘काम नभएकाहरू’, ‘क्षमता नभएकाहरू’ वा यस्तै, जसको कुनै आधार दिएर पुष्टि गर्नु उनीहरूका लागि बाध्यकारी छैन । अनि महिलाका विषयमा कलम चलाउनेलाई ‘अरू केही नजानेर लेखेको’ भन्ने खालका बहस भइरहन्छन् ।
मैले जागिरे जीवनको सुरुआत राजनीतिक बिट हेर्ने पत्रकारिताबाट गरेँ । एमएको थेसिस विपत्का पीडाहरूलाई पचाउने नेपालीको सामाजिक खुबीमाथि गरेंँ । एमएको थेसिस सक्दै गर्दा लाग्यो— महिलाको पाटो नबुझी समाज बुझिँदैन । अनि मैले महिला अधिकारवादीसँग बसेर दुई वर्ष काम गरेँ । एमफिल सकेर एमएका विद्यार्थीलाई पढाइरहेकी म नेपाली आख्यान, इतिहास, वर्तमान राजनीति र पत्रकारितालाई नजिकबाट नियालिरहेकी पनि छु । सहरीकरण, विपत् र समाजशास्त्रका सिद्धान्तमा एक हदसम्मको दखल राख्छु भन्ने ठान्छु । मेरै अगाडि कसैले मेरो जत्तिको पेसागत ढंग नभएकोलाई ‘तपाईं’ र ‘सर’ भन्दै मलाई ‘तिमी’, ‘बहिनी’ वा ‘चेली’ भन्छ, मलाई रिस उठ्छ । यस्तो धेरै महिलालाई हुन्छ र हामी ‘हामीलाई यस्ता सम्बोधन नगरिदेऊ’ भनी अनुरोध गरिरहन्छौं, कहिले लेखमार्फत, कहिले सामाजिक सञ्जालमा त कहिले प्रत्यक्ष रूपमा ।
आफैले वा आफ्नो समूहले भयंकर ज्ञानी भनिदिएका धेरैलाई लाग्छ— ‘महिला लेखकहरू वा अधिकारकर्मी वा प्राध्यापक महिलाको विषयबाहेक केही पनि जान्दैनन्’ वा ‘महिलाको विषयमा महिलाले नै लेख्नुपर्छ वा बोल्नु वा पढाउनुपर्छ’ । यस्तो धारणाको अन्तर्य हुन्छ— ‘महिलाको विषयमा लेख्न वा बोल्न वा पढाउन कुनै क्षमताको आवश्यकता पर्दैन, जसले पनि लेख्न बोल्न र पढाउन सक्छन्’ अनि ‘महिलाको मुद्दा खास मुद्दै होइन’ ।
मानव सभ्यताको यो चरणमा महिला कसैका दासी, सम्पत्ति वा इज्जत मात्रै होइनन्, उनीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएका सार्वभौम व्यक्ति पनि हुन् । आफ्नो पेसा वा व्यवसायमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी सहकर्मीहरूकै हैसियतका मान्छे हुन् । कसैले गरेको सम्बोधन, हाउभाउ वा व्यवहारले आफूलाई दिक्क पारेको, रिस उठाएको वा पीडा पुर्‍याएकोमा यसो नगर भन्ने मात्रै होइन, कानुनी लडाइँ लड्न पनि उनीहरू स्वतन्त्र छन् । तर यो कुरा स्विकार्न आमरूपमा पितृसत्ता तयार छैन । किनभने महिला पनि पुरुष बराबर हुन सक्छन्, उनीहरू दिनभर कार्यालयको काम सकी घर पुगेर घरको काम सकीवरी पितृसत्ताविरुद्ध बाझिरहन सक्छन् भन्ने ऊ कल्पना पनि गर्दैन ।
तर कसैले कल्पना गर्दैमा वा नगर्दैमा परिवर्तनको यो सिलसिला रोकिँदैन कि अझै गहिरिँदै जानेवाला छ । महिलालाई कार्यक्षेत्रमा आरक्षणसहित भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यतामा एकातिर सरकार छ भने, समाजको आवश्यकता महिलालाई घरबाहिर निस्केर काममा अब्बल दरिनुपर्ने पनि छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यक्षेत्रमा बिस्तारै महिला पुरुषको हाराहारीमा वा पुरुषभन्दा माथिल्लो पदमा हुने सत्यलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन । महिलालाई अप्ठेरोमा पार्दैमा वा दिक्क बनाउँदैमा कसैले केही पाउने पनि त होइन होला, गालीको सट्टा गाली, अपमानको बदला अपमानबाहेक ? अनि के पितृसत्ताले आफूलाई सच्याउनचाहिँ मिल्दैन ? हामीले ‘असहज भयो’ भन्दा ‘माफ गर्नुस्’ भन्न सकिँदैन ?
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७६ ०८:५६